China White color PPR varahina mampiditra orinasa tee vavy sy mpanamboatra | Pntek
Raha ampitahaina amin'ny fantsom-by, ny fantsona PPR dia manana tombony amin'ny fametrahana tsotsotra kokoa, ny insulated thermaly tsara kokoa ary ny fanoherana ny harafesina. Izy io dia fitaovana famatsian-drano mahasalama sy ara-tontolo iainana ary izy io koa no vokatra famatsian-drano mahazatra eny an-tsena. Ny fantsona PPR dia misy amin'ireto loko manaraka ireto, fotsy, Gray, maitso ary karizy, ny antony mahatonga an'io fahasamihafana io dia vokatry ny masterbatches miloko hafa.
Ankoatry ny toetran'ny fantsom-plastika ankapobeny toy ny lanjan'ny maivana, ny fanoherana ny harafesina, ny tsy fanamafisana ary ny androm-piainana maharitra, ny fantsom-pira PP-R dia manana ireto toetra manaraka ireto:
1 Tsy misy poizina sy fahadiovana.
Ny molekiola molekiola ao amin'ny PP-R dia singa karbonina sy hidrogen fotsiny, ary tsy misy singa manimba sy misy poizina. Madio sy azo ianteherana izy io. Tsy ampiasaina amin'ny fantsom-drano mangatsiaka sy mafana fotsiny izy io, fa ho an'ny rafi-pisotro madio ihany koa.
2 Fitehirizana hafanana sy fitsitsiana angovo.
Ny fitarihana hafanana an'ny fantsona PP-R dia 0.21w / mk, izay 1/200 fotsiny amin'ny fantsom-by.
3 fanoherana hafanana tsara kokoa.
Ny teboka fanalefahana Vicat an'ny fantsom-p PP-R dia 131.5 ℃. Ny mari-pana miasa farany ambony dia mety hahatratra 95 ℃, izay afaka mahafeno ny fepetra takian'ny rafitra rano mafana amin'ny kaody famatsian-drano sy ny fantson-drano.
Amin'ny alàlan'ny mari-pahaizana miasa amin'ny 70 ℃ sy ny tsindry miasa (PN) an'ny 1.0MPa, ny androm-piainan'ny fantsom-piraika PP-R dia mety hahatratra 50 taona mahery (raha toa ka tsy maintsy misy andiany S3.2 sy S2.5 na fantsona na Bebe kokoa); eo ambanin'ny maripana mahazatra (20 ℃) ​​Ny fiainam-panompoana dia mety hahatratra 100 taona mahery.
Fametrahana 5 mora sy fifandraisana azo antoka.
PP-R dia manana fahombiazana tsara amin'ny welding. Ny fantsona sy ny fittings dia azo ampifandraisina amin'ny fiempoana mafana sy ny herinaratra. Mety ny fametrahana ary azo itokisana ny tonon-taolana. Ny tanjaky ny fiarahana dia lehibe kokoa noho ny tanjaky ny fantson-drano.
Fitaovana 6 azo averina simbaina.
Ny fako PP-R dia diovina, vakivaky ary hodiovina indray ampiasaina amin'ny famokarana fantsona sy fittings. Ny habetsaky ny akora namboarina dia tsy mihoatra ny 10% amin'ny fitambarany ary tsy misy akony amin'ny kalitaon'ny vokatra.
Previous: Volo fotsy PPR varahina mampiditra kiho lahy
Manaraka: Volo fotsy PPR varahina inert lahy tee
Volo fotsy PPR varahina inert lahy tee
Valizy vavahady PPR
Valizy fotsy ppr ball valve
Valin'ny vovon-tsolika baolina kitra mifangaro PPR
White loko PPR tee